Soo dejiso barnaamijka si aad u naqshadeyso funaanadaha | War gadget
Haddii aad jeceshahay inaad dharkaaga sameysato ama aad rabto inaad yeelato dhar kuu gaar ah, waxaa jira barnaamij loo baran karo naqshadeyso funaanadahaaga.
Way fududahay in la helo, laga bilaabo download, oo rakib. Intaa waxaa dheer, barnaamijkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad naqshadeyso moodadaada moodooyinka 3D. Waa barnaamij aad adigu shakhsiyeeysan karto tusaalahaaga, ha noqoto midabka timaha, qurxinta, iyo waxyaabo kale; iyo marka lagu daro inaad awood u leedahay inaad doorato nooca dharka, moodooyinka, midabada, qaababka, iwm. Waa barnaamij waxtar badan u leh dadkaas doonaya inay samaystaan ​​funaanado ay iyagu leeyihiin, ha ahaadeen naf, qoys, inay wax iibiyaan ama wax bixiyaan.
Intaas oo dhan iyo waxyaabo kale oo aan ku guuleysan karno, mahadsanid Xirfadlayaal Casri ah oo Farshaxan ah, taas oo ah gratuito aadna waxtar ugu leh kiisaskan. Astaamaha kale ee lagu muujinayo barnaamijkan ayaa ah inay ku jirto Español markaa ma sahlanaan doonto inaad fahanto taada shaqeynaya mar ku dhex jira.
1 Barnaamijyada moobiilka
2 Barnaamijyada kombiyuutarka
3 Bogagga internetka
4 Sida loo qaabeeyo funaanad
5 Immisa ayey ku kacaysaa naqshadeynta funaanadaha?
Naqshadeynta funaanad waa wax aan sidoo kale ka sameyn karno taleefanka gacanta. Waxaa jira codsiyo tan ka dhigaya mid suurtagal ah, sidaas darteed waa ikhtiyaar kale oo wanaagsan in la tixgeliyo, maaddaama isticmaaleyaal badan ay aad ugu fududdahay inay tan ka sameyn karaan taleefankooda. Waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo laga heli karo Google Play, taas oo laga yaabo inay danaynayso arrintan.
Midka hore waa Naqshad oo daabac funaanadaada, taas oo ah barnaamij fudud oo fudud oo lagu abuuro naqshad shaati ah oo aan ka helno. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad sameysato fayl ama qaab dambe oo gadaal laga daabacan karo, si ay nooga caawiso howshan si la yaab leh. Naqshadaynta abku waa fududahay oo si fiican ayuu u shaqeeyaa. Waxaa si bilaash ah looga soo dejisan karaa Google Play:
Naqshadee oo daabac funaanadaada
Developer: Inta badan
Dhinaca kale waxaan haynaa naqshad funaanad - Snaptee, oo laga yaabo inuu yahay kan ugu caansan uguna khibrad badan arimahan. Waxay na siineysaa suurtagalnimada in la naqshadeeyo funaanad gaar ah oo laga soo bilaabo xoqidda. Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ka dooranno waxa aan dooneyno dareenkan, midabada, daabacaadda ama dhammaystirka. Sidaa darteed, haysashada naqshadeyntaadu waa mid fudud. Waxaa si bilaash ah looga soo dejisan karaa Android:
Naqshadaynta funaanad - Snaptee
Developer: Snaptee xaddidan
Haddii aad doorbideyso inaad ka sameysato shaati kumbuyuutarkaaga, sidoo kale waa suurtogal in la isticmaalo barnaamijyada qaarkood. Hawlgalkoodu wuxuu la mid yahay waxa aan ku haysanno taleefanka taleefanka, xaaladdan oo keliya waxaan u isticmaali doonnaa barnaamij kombiyuutarka ku jira. Waxay noo ogolaadaan inaan fulino dhamaan nidaamka naqshadeynta arjiga, si aan ugu raaxeysanno funaanad caado u ah 100%.
Markay sidaa tahay, xulashadu sidaa uma ballaaran, in kasta oo uu jiro barnaamij dan weyn laga leeyahay, waa maxay Desktop T-Shirt Abuuraha. Barnaamijkani wuxuu noo ogolaanayaa inaan si fudud uga sameysano funaanadaha kombuyuutarka. Waxaan u habeyn karnaa wax walba oo ku saabsan naqshadeynta, illaa aan ka helno midka aan dooneyno. Si fudud loo isticmaalo iyo ikhtiyaar wanaagsan oo la tixgeliyo.
Tani waa ikhtiyaarka korayay waqtiga badan. Waan la kulanay bogag badan oo web ah oo lagu abuuro naqshado funaanado shaqsi ahaan loo dhammaystiray. Kaliya samee baaritaanka Google si aad u aragto inay jiraan fursado badan oo laga heli karo arrintan. Intaas waxaa sii dheer, howlgalka iyaga ka socda waa isku mid, sidaa darteed dhibaatooyin badan nagama lahaan doonaan arrintan.
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa Teespring, waxa aan ka arki karno iskuxirahan. Boggan waxaan ku abuuri doonnaa naqshadda aan dooneyno, xulashada noocyada kala duwan ee funaanadda, abuurista midabada aan dooneyno inaan adeegsanno iyo sidoo kale qoraalka aan dooneyno inaan ku dul dhigno. Waxaas oo dhami waxay u oggolaanayaan naqshad shaqsiyeed 100%. Intaas waxaa sii dheer, iyadoo kuxiran waxyaabaha dheeriga ah ee aan ku darno, waxaan arki karnaa qiimaha la sheegay in shaarka uu ku kacayo.
T-shirtimedia, halkan xiriirkan ayaa laga heli karaa, waa ikhtiyaar kale oo laga fiirsado qaybtan suuqan. Waxay na siineysaa suurtagalnimada in la abuuro funaanado si aan u jecel nahay. Waa degel internet wanaagsan haddii aan dooneyno inaan abuurno dhowr cutub, sida laga yaabo inay dhacdo haddii ay tahay dhacdo gaar ah, tusaale ahaan. Dareen leh in la isticmaalo oo guud ahaan si fiican loo qiimeeyo.
Spreadshirt waa websaydhka saddexaad ee aan soo sheegnay, taas oo ah ikhtiyaar kale oo wanaagsan oo laga fiirsado. Waxay na siin doontaa suurtagalnimada in lagu abuuro naqshadda aan dooneyno funaanadaha. Intaas waxaa sii dheer, waa degel si sahlan loo isticmaali karo, awoodna u leh sameynta funaanado dhammaan noocyada dadka (dadka waaweyn ama carruurta). Waxaan sidoo kale dooran karnaa wax walba oo ku saabsan shaatiga, sida qalabka. Xitaa waa loo oggol yahay in la abuuro funaanad deegaan, taas oo runtii aad u xiiso badan. Fursad weyn, inaad booqan karto halkan.
Sida loo qaabeeyo funaanad
Nidaamku badanaa waa isku mid dhammaan bogagga shabakadda. Waa inaan dooro dhinacyada qaarkood marka hore, sida maaddada aan dooneyno inaan ku isticmaalno shaatiga iyo midabkiisa. Si isticmaale kasta u dooran karo ikhtiyaarka la doonayo. Waxaa jira bogag leh midabbo badan, laakiin guud ahaan dhib badanaa maahan.
Waxa caadiga ah waa in marwalba loo oggol yahay sameynta qoraal shaqsiyeed, oo ay ku jirto suurtagalnimada xulashada font. Waxaan sidoo kale ku soo bandhigi karnaa sawirro ama astaamo ku dhex jira, taas oo xaalado badan aan ku qasbanaaneyno inaan ka soo rarno kombiyuutarka, sidaas darteed waa muhiim inaan helno feyl keydin ah oo aan dooneyno inaan ku isticmaalno kiiskan. In kastoo badankood bogagga ama barnaamijyadu sidoo kale waxay leeyihiin waxyaabo aan isticmaali karno, haddii aan rabno inaan soo bandhigno qaabab. Waxa caadiga ah waa inaad bixisaa xaddiga walxaha aan adeegsanno.
Sidan oo kale, waxaan u qaabeyn karnaa naqshada shaatigaan jecelnahay marwalba. Markii aan dhammeyno, waxaan kaliya dooran doonnaa cabbirka iyo unugyada aan ka dooneyno shaatigan, sidaas ayaanna ku ogaan doonnaa qiimaha ay naqshaddan naqshadeynta ah ku kici doonto. Bogag badan ayaa u muuqda inay hoos u dhigayaan qiimaha haddii cutubyo badan la dalbado.
Immisa ayey ku kacaysaa naqshadeynta funaanadaha?
Naqshadeynta funaanadaha ma qaali. Bogagga badankood waxay u muuqdaan inay ku socdaan isla xuduudaha, kuwaas oo u dhexeeya 10 ilaa 20 euro. In kasta oo ay kuxirantahay waxyaabo badan, oo noqon doona qiimaha ugu dambeeya ee funaanada la sheegay. Dhinac marka laga eego, agabyada aan isticmaalno waa kuwo go’aan qaadanaya, maaddaama qaarkood qaali yihiin, gaar ahaan haddii aan ku sharadno shaatiga bey'adda, sida dukaamada qaarkood noo oggolaadaan.
Midabada sidoo kale saameyn ayey yeelan karaan, maadaama midabada qaar ay ka dhib badan yihiin soo saaristooda waxaana jira bogag lacag badan bixiya. Laakiin inta badan maahan khilaafaad weyn oo arrintan la xiriira. Ugu dambeyn, cunsurrada aan adeegsanno, sida sawirrada, astaamaha, astaamaha, iwm.. Tani waxay ka dhigan tahay in qiimaha shaati la sheegay uu ka sarrayn karo. Bogagga qaarkood waxay ka qaadaan shay halkii shey, halka kuwa kalena ay hal mar naga qaadaan Mid waliba wuxuu leeyahay nidaam u gaar ah.
Kuwani waa dhinacyo wax ku biiriya qiimaheeda, laakiin gaar ahaan qaali kama dhigayaan. Naqshadaynta funaanadaha waa shay gaadha dhammaan jeebadaha. Sidaa darteed, haddii aad ka fekereysay inaad abuurto naqshad kuu gaar ah, waxaad arki doontaa inay tahay wax fudud oo aan qaali ahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Soo dejiso barnaamijka si aad u qaabeyso funaanado
si fiican barnaamijku wuu u isticmaali doonaa. Mahadsanid.
ps waxaan rabaa inaan kala soo baxo si aan shaatiyada u dhaho
Ku jawaab yt
sidee u soo degsadaa
sidee u degsan barnaamijkan ii sheeg xfa
Sidee barnaamijka loo soo dejisan karaa?
dabeecad walaal dijo
Waxaan u baahanahay barnaamij aan ku qaabeeyo mugga barnaamijkee aan isticmaali karaa oo aan Photoshop iyo hofmman midna ahayn
Ka jawaab dabeecadda walaal
Cloudya: Nidaamka taleefanka daruurta ugu fiican
Kuwa mas'uulka ka ahaa Taxanaha Yonkis ugu dambeyn dhammaantood waa la caddeeyay